राशिअनुसार हेर्नुस् आजको तपाईंको भाग्य (भिडियोसहित), Latest breaking news and updates on latest top stories, Video News, national, international, NRN, Gulf News, politics, sports, business, finance, entertainment, photo-gallery and more. Nepali News from Nepal and All over the Countries.
राशिअनुसार हेर्नुस् आजको तपाईंको भाग्य (भिडियोसहित)
बिश्वासिलो ब्यत्तिहरुबाट धोका हुन सक्नेछ । सामान्य वादबिवादको झमेलामा फसिएला । मध्यान पश्चात मान्यजनहरुको साथ सहयोगमा जटिलकार्य हरु सम्पादित रहनेछन । सामान्य यात्राको सम्भाबना रहेकोछ ।
ब्यापार ब्यवसायमा समय उत्तम रहेकोछ । भोगबिलाका क्षेत्रमा समय ब्यतित रहनेछ । मध्यान पश्चात खानपानका कारण स्वास्थमा सामान्य तनाव उत्पन्नहुन सक्नेछ । आय आर्जनका निम्ती समय मध्यम रहनेछ ।
प्रतिपक्षीहरु सवल रहनाले कार्य सम्पादनमा सामान्य तनाव उत्पन्न हुन सक्नेछ । सामाजिक कार्यमा जुट्ने समय रहेकोछ । मध्यान पश्चात परीवारका सदस्य हरु बिचमा सामान्य तनाब उत्पन्न हुन सक्नेछ ।
अध्यनअध्यापनमा समय ब्यतित रहनेछ । आम्दानि क्षेत्रमा समय मध्यम रहनेछ । मध्यान पश्चात गरीरहेको कार्यमा सामान्य झन्झट उत्पन्न हुन सक्नेछ । सामाजिक कार्यका क्षेत्रमा जुट्न उत्तम समय रहेकोछ ।
भौतिक श्रोत साधनको प्रयोगमा समय ब्यतित रहनेछ । मान्यजनहरुको साथ सहयोगमा बृद्धिहुनेछ । मध्यान पश्चात रचनात्मक तथा मनोरञ्जनका क्षेत्रमा समय ब्यतित रहला । अध्यनअध्यापनका क्षेत्रमा ब्यतित रहला ।
सामान्य यात्राको सम्भाबना रहेकोछ । मित्रजनहरुकोसाथ सहयोगमा गरीएका कार्य उत्तम रहनेछन । मध्यान पश्चात पारीवारीक झोर झमेलाको सम्भावना रहेकोछ । अधुराकार्यहरु सम्पादीत रहनेछन ।
खानपानको योग रहेकोछ । कुलकुटुम्बहरुको साथ सहयोगमा बृद्धिहुनेछ । स्थीर क्षेत्रमा गरीएको लगानि उत्तम रहला । मध्यान पश्चात मित्रजनहरुबिच सामान्य तनाव उत्पन्न हुन सक्नेछ । यात्राकारक समय रहेकोछ ।
सबारी साधनको प्रयोमा बिशेष सजग रहनु पर्नेट । मध्यान पश्चात आम्दानिका बिभीन्न श्रोत हरु फेला पर्नेछन । बौधिक ब्यत्तित्व हरु सगँको भेटघाटको योग बन्नेछ । मनोरञ्जनका क्षेत्रमा समय ब्यतित रहनेछ ।
यात्रामा बिशेष सजग रहनु होला मध्यान पश्चात पारीवारिक साथ सहयोग द्वारा कार्य सम्पादनमा सहजता प्रात्त हुनेछ । सामाजिक दायित्व बढेको महसुस हुनेछ । सभासमेलनमा सरीक हुने अवसर जुट्नेछ ।